5 အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20/01/2021)
တစ်ဦးကရထား Save သို့ဆောင်ခဲ့သည်ကိုသင်5အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်! ဖို့ပိုရှိဘယ်လ်ဂျီယံထက်ဘီယာ. ဇာတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, လြှို့ဝှကျခပန်းပု, နှင့်မြို့ကမဟုတ်ကြသော်လည်းသင်တို့၏ရေဒါတွင်ဒါပေမယ့်လုံးဝသင့်! ဘယ္လ္ဂ်ီယံရဲဝှက်ထားသောကျောက်မျက်သငျသညျမကြာအတူမေတ္တာ၌လဲကျ.
1. အ Underrated မြို့၏Mechelen
Mechelen တစ်ဝက်ဘရပ်ဆဲလ်နှင့် Antwerp ကြား. အဆိုပါမြို့လယ် gabled Renaissance အိမ်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်, ဂရုတစိုက်ပွနျလညျထူထောငျ, ဈေးတစျခုအခြမ်းအပေါ် Gothic အဘိဓါန်ဘုရားကျောင်းမှာနှင့်မြို့တော်ခန်းမကလွှမ်းမိုးနေ, ထို့အပြင် Gothic အဘိဓါန်, အခြားအပေါ်. Mechelen မကြာခဏသတိမမူ၏မျက်နှာသာအတွက်ပိုပြီးလူကြိုက်များခရီး. သို့သျောလညျး, ကုတ်အမည်အမြန်ဆုံးရှာဖွေလှပသောအဘယ်လ်ဂျီယံအခြေချကြောင်းထက်ပိုတန်ဖိုးရှိသင့်ရဲ့အချိန်၌ရှိနေစဉ်ထိုနိုင်ငံနှင့်ကျိန်းသေ၏တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်!
Antwerp ကို Mechlen ရထား
ဒီအ Mechlen ရထား
အိပ် Mechlen ရထား
2. Tienen ၏သကြားမြို့
ကြောင်းတတျနိုငျသငယ်မြို့ (သကြားနှင့်အတူ!) ရှိပါကသင်သည်အစဉ်အဆက်ပျော်မွေ့တစ်သကြားတစ်ဦးအထပ္ကိန္းတူ၏လတ်ဆတ်သောအကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမသံသယကြောင့်ဖြစ်ကောင်း Tienen ၏အလွန်သေးငယ်သောမြို့မှာလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြလိမ့်မယ်. ဤသေးငယ်သောမြို့သည်မဝေးကနေ Leuven. အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကို နှင့်ဖလန်းဒါးစ်ရှိ Flemish Brabant ၏အလွန်နှလုံးတွင်, ဤသီချင်း၏စိတ်နှလုံးမှာရောမကြွေထည်မြေထည်နှင့်ဖန်ထည်ဖော်! ဤသည်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဘယ်လ်ဂျီယံခုနှစ်တွင်က Hidden ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်!
Tienen အတွက်မျက်စိနှင့်တွေ့ဆုံသည်ထက်ပိုရှိပါသည်. အဆိုပါသိသာအဓိကအသင်းတော်များကျော်လွန်ကွညျ့ရှု. စိမ်တက်ဝန်းကျင်နှင့်နမူနာဒေသခံဟင်းလျာ (ရိုးရာ Flemish အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့စွပ်ပြုတ်အဖြစ်အများအပြားအသား-မိုးသည်းထန်စွာအဓိကပါဝင်သည်, meatballs, နှင့် mussels).
မြို့၏ ပို၍ ထင်ရှားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ Sint Germanuskerk ဖြစ်သည်, တစ်ဦးခြင်းဖြင့်ထိပ်ဆုံးထူးခြားတဲ့ Romanesque ဘုရားကျောင်း ယူနက်စကို belfry နှင့်ချိန်းတွေ့ပြန်မှ ၁၃ ရာစုနှစ်. ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လအတွင်းမှာတော့, carillon ဖျော်ဖြေပွဲတိုင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရာအရပ်ကိုယူ. သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်က Add!
Antwerp ကို Tienen ရထား
Namur အ Tienen ရထား
သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် ရထားဖမ်း အကူအညီဖြင့်ကယ်ရထားမှဘရပ်ဆဲလ်. ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးဆယ်မိနစ်စီးနင်းတောင်မြို့၏Hoeilaart. ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အလုပ္အကိုင္ရွာေအ Sonian သစ်တောနှင့်5အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက် လည်ပတ်ရန်!
သငျသညျရှာဖွေစူးစမ်းသဘာဝကိုချစ်လျှင်, ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအခြေစိုက်စခန်း, အလုပ်များဘရပ်ဆဲလ်၏အပြင်ဘက်တွင်. သစ်တောပြတိုက်ဇန်နဝါရီဗန် Ruusbroec သွားရောက်ကြည့်ရှု, များစွာသောလမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းများထဲမှရှာဖွေစူးစမ်းရှေ့တော်၌ထိုသစ်တောအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်.
Hoeilaart အခြားဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ရှိပါတယ်; ကနေအိမ်မှအကောင်းဆုံးစပျစ်လ်ဂျီယံအတွက်. Hoeilaart ခဲ့သည်တစ်ချိန်ကအဖြစ်လူသိများ ဖန်ခွက်ကိုမြို့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံး၏အစပျစ်သီးကိုအပြည့်ဖန်လုံ. ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ပေါင်းများစွာလျော့ထားပါတယ်နေစဉ်, Hoeilaart စပျစ်သီးနေဆဲတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းတန်ဖိုးကြီးလျက်ရှိသည်, သူတို့အလွန်လျင်မြန်စွာထွက်ရောင်း, ဒါဟာအကောင်းဆုံးအသွားပါမှဖြောင့်အရင်းအမြစ်ပေါ်သင်၏လက်ကိုရဖို့သူတို့ကို.
ခ်ဖို့ Hoeilaart ရထား
Antwerp ကို Hoeilaart ရထား
Liege အ Hoeilaart ရထား
4. ချိုဝှက်ထားလျက်ရှိသောကျောက်မျက်များ – Tongeren, Limburg
ခရီး အသက်အကြီးဆုံးမြို့၌ဘယ်လ်ဂျီယံ. အမည်ပြောင်ပေးခဲ့သောကြောင့်၎င်း၏ကြွယ်ဝဂါရောမသမိုင်း. ဒီသမိုင်း၏အရိပ်လက္ခဏာကိုမွို့တလျှောက်လုံးမြင်နိုင်များမှာ, သို့သော်အကောင်းဆုံးအစပြုခြင်းမှာဆုရ Gallo Roman Museum ဖြစ်သည်. တခါညျ့တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုထားပါတယ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ့ထိန်းသူတစ် ဦး ပေါ်လမ်းများပေါ်သို့ရိုက်သည် လမ်းလျှောက်ခရီးများ Tongeren ရှိသမိုင်းအလွှာများကိုရှာဖွေရန်.
ဒီကလေးမြို့ရှိနှစ်ခုအနက်ဖော်ပြထားသောတနင်္လာ, ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ Basilica ၏ belfry နှင့် beguinage. အဆိုပါ Beguines ၏ဘဝအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, အသင်းတော်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆက်ကပ်အပ်နှံသောသူသည်အမြိုးသမီးမြား, အဆိုပါ Beguinage ပြတိုက် Beghina မှာ. တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ, Tongeren ရှင် Beneluxs မားဆုံးရှေးဟောင်းစျေးကွက်, ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ 350 သမိုင်းအားလုံးအချိန်ကာလကနေရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းချ stallholders.
လျှင်သင်ဆဲခဲ့ကြပြီမဟုတ်သင့်ရဲ့ဖြည့်စွက်၊အတိတ်၏5အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်, ပုံတရားဝင်ဥယျာဉ်တော်မှတဆင့်တစ်ဦးအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်များအတွက်အနီးအနား Alden Beisen Castle မှာရပ်တန့်.
Maastricht အ Tongeren ရထား
Liege အ Tongeren ရထား
Aachen အ Tongeren ရထား
ခိုင်းဖို့ Tongeren ရထား
5. ချိုဝှက်ထားလျက်ရှိသောကျောက်မျက်များ – Binche, Hainaut
မြို့၏Binche အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံဒေသ၏Hainaut တူများစွာသောအခြားအသေးငယ်တဲ့မြို့အတွက် Wallonia. ဒါဟာအိပ်ချင်အမျိုး၏နေရာအရပ်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသာအဓိက ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု, ထူးမြတ်သောအရောင်အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲတော်ကြီး၏ပြတိုက်များနှင့်မျက်နှာဖုံး, သို့မဟုတ်.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Ash ကိုမှတက်ဦးဆောင်ကာလ၌ရှိ, Binche ဘာမှပေမယ့်အိပ်ချင်ဖြစ်ပါသည်. Binche များ၏ပွဲတော်ကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပြီးဆက်ဆက်တစ်ဦးက hidden ကျောက်မျက်! အဆိုပါအခမ်းအနားပီပီဝတ်စုံကပါဝင်ပတ်သက်, ဂီတ, ကခုန်, အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာများနှင့်တရားမျှတသော bit နဲ့! ဒါဟာတကယ်တော့ဒါအထူးဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ယူနက်စကိုတို့ကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ခံတွင်းနှင့် Intangible အမွေအနှစ်တစ်ခုလက်ရာအဖြစ်ရေးထိုးနေသည်.
အဆိုပါအစဉ်အလာများနှင့်အခမ်းအနားများအပြင်ကလူဖို့လုံးဝနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်, ကံကောင်းတာကမေရှိရှင်းပြဖို့အတွက်အရာအားလုံးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအသေးစိတ်. တက်ရောက်တဲ့ပွဲတွေ၏Binche အမှန်တကယ် မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို.
ဘရပ်ဆဲလ်အ Binche ရထား
Antwerp ကို Binche ရထား
ခ်ဖို့ Binche ရထား
Reims အ Binche ရထား
အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ5အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်? ထိုအခါမှကိုကျော်ပေါ်ဦး တစ်ဦးကရထား Save ယခု. အဘယ်သူမျှမက hidden ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူမိနစ်စာအုပ်, ကိုယ့်ကိုဝှကျထားကျောက်မျက်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-belgium%2F – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#secretbelgium #travelbelgium #travelhiddengems europetrains europetravel hiddengem ရထားခရီးသွား travelbelgium